Amakha aphumelele kakhulu eminyakeni yamuva | Amadoda aSitayela
Amakha aphumelele kakhulu eminyakeni yamuva
Amakha ayimfuneko kwabaningi. Futhi yilokho amakha amahle kwenza umuntu afiseleke, athandwe noma athathwe kahle, phakathi kwezinye izinto. Amafutha akhuluma kakhulu ngomuntu ozifakayo, yingakho, selokhu adalwa, amakha asebenza futhi azobamba indawo ebalulekile emhlabeni wezimonyo. Kulokhu okuthunyelwe sigxila kumakha wamadoda, ikakhulukazi kwifayela le- amakha amadoda nguPaco Rabanne. Kufana nobuhle, ukwazi ukuba nomsebenzi omuhle.
Umkhiqizo odumile owaziwayo one- Amakha ayisigidi esisodwa ngosayizi abahlukahlukene nokuthi ungathola ku AmaPerfume.com, siya phambili ezweni lamakha abesilisa kulokhu okuthunyelwe.
1 Ukubaluleka kwamakha
2 Amakha amadoda aphelele
Njengoba uGiorgio Armani esho:
«Iphunga elikhethwe kahle kungaba isici esihlukanisayo. Kuyinto yokuqala abantu abazizwa ngayo uma ungena egumbini futhi into yokugcina abazizwa ngayo lapho usuka.
Ngoba amakha angaphezulu kokunuka nje, amakha achaza umuntu, angavusa izinkumbulo, imizwa, futhi aguqule isimo. Esinye isici esisiza ukwenza amakha njengawomuntu siqu njengoba ungacabanga ukuthi amakha afanayo awanuki ngendlela efanayo kubo bonke abantu.
Ukuze usebenzise amakha ngendlela eyiyo, isikhathi esihle sokuyisebenzisa kungemuva kokugeza. Ngale ndlela izothatha amahora amade, noma ngaphezulu uma uyifaka ezindaweni ezifana ngemuva kwezindlebe, intamo, ingaphakathi lezihlakala noma ngaphakathi kwezindololwane. Kulezi zindawo igazi ligeleza lisondele esikhunjeni futhi izinga lokushisa komzimba liphakeme, ngakho-ke ukuhwamuka kwephunga kuhamba kancane kakhulu kunezinye izindawo. Elinye iqhinga lokwelula isikhathi salo ukusebenzisa isithambisi ngaphambi kwamakha. Kulokhu, amafutha okuthambisa angenasici.
Mayelana nokulondolozwa kwesiqholo, kuhle ukusigcina ebhokisini laso endaweni eyomile futhi lapho singatholi khona ukukhanya okuningi.
Amakha amadoda aphelele
Ukugxila kumakha besilisa, nokukhuluma ngakho amakha ethrendi ngo-2020, uma kukhona uphawu olunqoba ngokudilika komhlaba, nguPaco Rabanne, ikakhulukazi, Isigidi esisodwa nguPaco Rabanne. Kungamakha amnandi futhi akhethiwe kakhulu abonisa indoda ezethembayo engadeli ubumnandi.
Este Amakha ayisigidi esisodwa Idalwe ngamanothi ayinika ubuntu obuningi, ngakolunye uhlangothi, inezithunzi zemandarin ebomvu nopelepele omnyama okunezelwa ukuthinta izinongo ezifana nesafron noma i-cardamom. Ngakolunye uhlangothi, umongo wezinti ze-rose nesinamoni unikeza iphunga nokufudumala okungenakuqhathaniswa. Ezinye izincazelo ukuthi Amakha ayisigidi esisodwa nguPaco Rabanne amanothi e-patchouli, isikhumba, i-sandalwood noma i-lily.
Ngoba umhlaba wamakha ubanzi kakhulu, kepha amakha kaPaco Rabanne yiwona afunwa kakhulu yibo bonke abantu besilisa.
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » Ukunakekelwa komuntu siqu » amakha » Amakha aphumelele kakhulu eminyakeni yamuva
Izinhlobo ezinhle kakhulu zemoto yezemidlalo